Ihe ngosi mbu nke Wileyfox Spark X | Gam akporosis
Wileyfox na-bụ mmalite british nke bilitere dị ka otu n’ime ihe ndị na-atọ ụtọ na Europe maka ekwentị ndị dị ọnụ ala. A na-ejikwa ekwentị ha nwere CyanogenMod dị ka ROM ma nke a pụtara ìhè mgbe ị na-anwa ịgbanye ekwentị, ebe ọ bụ na ị na-egbochi ahụmịhe pụrụ iche nke gam akporo iji gbanwee ihe mmadụ chọrọ, ọ na-enyere aka ịgbanye ma wụnye ndị ọzọ ROM ma ọ bụrụ na achọrọ, ma e wezụga ruo ụbọchị mgbe ọ bịara gam akporo.
Wileyfox Spark X bụ otu n’ime nsogbu ị kacha njọ maka ekwentị nke wepụtara ọnwa anọ gara aga na e ji a 5,5 ″ ihuenyo, 2 GB nke Ram, 1,3 GHz Mediatek quad-core chip na 13 MP n'azụ igwefoto tinyere 8MP n'ihu igwefoto. Ama nke na-adịghị agafe € 149,99 na nke ahụ dị iche na ndị ọzọ site na ịnwe CyanogenMod, yabụ, ọ bụrụ na oge ọ bụla ị gabigara na ROM ahụ na njedebe gị, ị maraworị ihe ị na-agbaso, n'ụzọ dị mma, na ekwentị a .
1 Ekwentị na CyanogenMod
2 Spark X nkọwa
3 Ndị akpaaka gị abụọ
Ekwentị na CyanogenMod
Nke a bụ ihe kachasị na m si na Spark X. A CyanogenMod na egosila na ọ bara uru site na inye ọtụtụ ROM nye ndị gam akporo, mgbe ọ dị mkpa maka otu ndị mmepe nke maara ka esi enweta ngwaike nke ika nke leghaara ọnọdụ kachasị mma na ngwanrọ ahụ anya.
N'ihi afọ ndị ahụ, CyanogenMod emeela aha maka onwe ya na ngwaọrụ ọ bụla ewepụtara na ahịa na CM nwere mkpesa pụrụ iche nke ha. Nke a bụ ihe na - eme Spark X, smartphone na na-arụ ọrụ nke ọma na usoro ya niile na na ị nwere ike ịnweta na ọnụ ala dị ala iji nwee ike ikwado ya ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị. Nke a bụ akụkụ ya kachasị mma, ebe ị ga-eche na ekwentị bụ nke gị n'ezie na ọ dịghị mkpa ịrịọ ikike ka itinye aka gị ebe ọ bụla ịchọrọ.
Na nkọwa ya anyị na-ahụ nnukwu nguzozi iji nweta a quad-isi MediaTek mgbawa, Ihuenyo 5,5 ″ HD, 2 GB nke Ram, 16GB ebe nchekwa dị n'ime ya na nhọrọ micro SD na batrị 2.200mAh. Ọ nwekwara SIM abụọ na gam akporo 6.0.1 n'ụdị CyanogenMod 13. Ọ na-akụ ụbọchị batrị zuru oke ma bụrụ ekwentị na-enye ezigbo ahụmịhe gam akporo.
Spark X nkọwa
5,5 ″ HD IPS LCD 1280 x 720 267 ppi ihuenyo
1,37GHz Mediatek quad-isi mgbawa
13 MP n'azụ igwefoto na 1080p
Gam akporo 6.0.1 CM 13
Arọ: gram 163
Ndị akpaaka gị abụọ
Obere nkwarụ abụọ maka ihe bụ ekwentị na-enye nnukwu arụmọrụ maka ọnụahịa ya. Nke mbụ bụ obere mkpebi o nwere, naanị HD (1280 x 720), ịbụ ama nwere ihuenyo 5,5 ″. O doro anya na ị gaghị ajụ ihe niile, mana ọ bụrụ na ọ dabere na Full HD, ọ gaara abụ ekwentị gbara gburugburu.
Isi ihe ọzọ m na-ahụ na-adịghị mma bụ na ọ bụ dị ọkà okwu na ala azụ. Ọ ga - abụ na ejiri m na Xperia Z5 nke nwere okwu okwu stereo abụọ ahụ edere na elu na ala nke ihu, mana ọ bụ nkọwa zuru ezu nke m na-achọghị ịhapụ.
Ma ọ bụghị, ezigbo echiche maka ọnụ na-efu € 149,99, na enweghị nyocha nke ga-abịa n'oge na-adịghị anya site na otu akara ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Mmetụta mbụ nke Wileyfox Spark X
Google weputara udiri ihe nlere nke ihe nchọgharị mkpanaka ya: Chrome Canary
Ihe mmelite Arrow na mmelite Google Search na ndị ọzọ